‘किरणले अवश्य जित ती’ | eAdarsha.com
‘किरणले अवश्य जित ती’
पोखरा, २३ वैशाख । अजानको समय भयो, २ मिनेट शान्त बसौँ है । मियापाटन बस्तीमा घन्किरहेको नेपाली कांग्रेसको गीत र जय नेपालको नारा २ मिनेटको लागि शान्त भयो ।
मुस्लिम अगुवाहरुले नै त्यहाँ उमेदवारलाई बस्तीदेखि बस्तीवासी देखाइरहेका थिए ।
अजान भनेको नमाज पढ्न बोलाउनु हो । हरेक शुक्रबार मुस्लिमहरुको विशेष नमाज हुन्छ । चुनावको सन्दर्भमा भोट माग्दै गरेका उम्मेदवार र मतदाता सबैको शिरमा टोपी थियो । उम्मेदवार स्वयमले बाटुलो सेतो टोपी लगाएका थिए, कतिपयले ढाकाटोपी पहिरे । नमाजको समय सकिएपछि सामुहिक तस्बिर खिचे । अनि लागे घरदैलोमा ।
यो चुनावी दृश्य हो, पोखरा १३ को । जहाँ किरण बराल वडाध्यक्षको उम्मेदवार थिए । उनै किरणलाई बीचमा राखेर तस्बिर खिचाएपछि बस्तीका अगुवाहरुले घर, मतदाता चिनाउँदै हिँडे ।
सयौँको संख्याको त्यो जमाते पोखरा १३ मा किरणको क्रेज देखाउँथ्यो । मियापाटन मुस्लिम बस्ती हो । पोखराको इतिहासमा पुरानो बस्तीमध्येको यो पनि एक हो ।
त्यही बस्तीका समाजसेवी तथा अगुवा बासिन्दा हुन्, हाजी जलाल बक्स मिया । उनले वडाध्यक्षका उमेदवार बरालसँग गला मिलाए ।
अनि आशीर्वाद दिए, ‘मेरा घर २७ मतदाता छन । किरण बाबु मेरो नातिको साथी हो, केही पीर मान्नै पर्दैन । ढुक्क हुनु ।’
मियाको पुस्ताको शताब्दीको इतिहास छ मियापाटनमा । उनकी श्रीमतीले भनिन्, ‘किरण बाबु अवश्य जीत ती ।’ ‘किरण बाबुले अवश्य जित्नेछौं ।’ मिया परिवारको आशीर्वाद पाएपछि बरालको टोली अगाडि बढ्यो । बस्तीका युवाहरु अघिअघि लागे ।
त्यो क्रेज र उमेदवारसँग सँगसँगै हिंडिरहेका थिए, ५३ वर्षका मोहमद अलि । पहिला नयाँशक्ति पार्टीबाट राजनीति गरेका उनी अहिले कांग्रेसका उम्मेदवारसँगसँगै हिंडिरहेका थिए । उनलाई प्रश्न गर्‍यौँ, किरण बराललाई जिताउन लागिपर्नुभएको रहेछ त ?
‘म अहिले स्वतन्त्र हो । रिकन्डिसन चलाउँथे । कोभिडको कारणले छाडे । हामीलाई जसले समुदायलाई टेवा पुर्‍याउन सकोस, कतिपय कुरा हामीलाई अपर्याप्त छन । त्यसको पूर्तिको लागि योग्य व्यक्ति खोजेका छौं । हाम्रो चाहना पूरा गरोस् । त्यो सम्भावना मैले किरण बरालमा देखें,’ उनले भने, ‘उहाँसम्म केही दिन बसेर कुरा गर्दा पनि उहाँ सहनशील हुनुहुन्छ । उहाँको बोली, मिजास, घुलमिल, अपनत्व र सहयोगी बानी लाग्यो ।’
उनकै पुस्ताले पृथ्वीचोकदेखि मियापाटनसम्मको बाटो बनाएको उनी सम्झिन्छन् । भीडमा हिंडेका एक युवाले नारा भट्याइरहेका थिए । उमेदवारलाई बाटो देखाउने युवालाई सोध्यौं ?
साँच्चै किरण बरालले चुनाव जित्छन् त ?
ती युवाले भने, ‘यो क्रेज र भीड देख्नुभएन ? त्यो आशीर्वाद देख्नुभएन ?’